M/weyne Faroole iyo wafti uu hogaaminayo oo safar halweed ku tagay Xarfo, kulan wadatashi ah la yeeshay maamulka, Issimada & taliyayaahsa ciidanka ee gobolka Mudug. – Radio Daljir
Luulyo 23, 2010 12:00 b 0
Xarfo, July 23 – Wafti ballaaran oo uu hoggaaminayo m/weynaha dawladda Puntland Dr C/raxmaan Maxamed Maxmuud ‘Faroole’ ayaa saaka barqanimadii soo gaaray degmada Xarfo ee gobolka Mudug, iyagoo ka soo kicitimay magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland.
Waftiga M/weynaha oo ahaa mid aad u ballaaran ayna ka mid yihiin xubno iskugu jira golayaasha dawladda sida xukuumadda , wakiillada iyo sidoo kale qaar ka mid ah saraakiisha sar sare ciidamada daraawiisha iyo kuwa bileyska ayaa si diiran loogu soo dhaweeyey degmada Xarfo, waxaana safarkaani uu ahaa mid aan horay loo sii shaacin.
Soo dhaweynta waftiga waxaa ka qaybgalay mas’uuliyiinta maamulka gobolka Mudug oo uu horkacayey guddoomiyaha gobolka Mudug Axmed Cali Salaad, maamulka degmada Xarfo, issimo, nabadoonno iyo dadweyne kale oo aad u tiro badan.
Soo dhaweynta kaddib waxaa waftiga m/weynuhu shir ay albabbadu u xiran yihiin ka galeen qaybaha kala duwan ee maamulka gobolka Mudug oo ay ka mid yihiin saraakiisha nabadgalyada, issimada kala duwan ee gobolka Mudug, nabadoonnada, waxgaradka gobolka oo halkaasi badankoodu saakay gaaray.
Ma cadda ujeedda safarka m/weynaha iyo waftigiisu ay ku yimaadeen degmada Xarfo ee gobolka Mudug, si rasmi ah looma shaacin waxyaabaha si tooska ah looga wadlayo, hase ahaatee mas’uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Mudug oo ay la hadashay idaacadda Daljir ayaa sheegay kulanku in uu ku qatomo arrimo badan oo la jaanqaadaya xaaladda dalka ayna ugu horrayso ammaanka guud ee Puntland gaar ahaanna midka gobolka Mudug.
Marka uu dhammaado kulankaasi waxaa la filayaa m/weynaha iyo waftigiisu in ay dib ugu laabtaan magaalada Garoowe ee xarunta dawladda Puntland, halkaasi oo ay markii hore ka soo kicitimeen.
Waa markii ugu horraysay oo uu m/weynuha Puntland C/raxmaan Maxamed Maxmuud ‘Faroole’ uu yimaado deegaanno ka mid ah gobolka Mudug wixii ka danbeeyey dilkii wasiirkii warfaafinta Puntland Warsame Cabdi Shirwac bartamihii sanadkii 2009, xilligaasi oo m/weynaha iyo wafti oo horkacayey ay ka soo qaybgaleen aaskii wasiirka oo ka dhacayey qabuuraha duleedka magaalada Galkacyo.
Socdaalka m/weynaha iyo waftigiisu waxay ku soo beegmayaan xilli dawladda Puntland ay ku guda-jirto hawlgallo ballaaran oo lagu adkaynayo ammaanka Puntland gaar ahaan midka magaalada Boossaaso oo ah halbawlaha dhaqaalaha Puntland, waxaana dhanka kale oo ku soo aadayaa xilli dawladda Faroole ay isku diyaarinayso dagaal ka dhan ah kooxo sheegtay in ay taabacsan yihiin Al-shabaab oo fariisimo ka samaystay buuralayda Galgala ee gobolka Bari.
Dawlada hoose ee Galkacyo oo ugu baaqay dawlada Puntland in ay dhawrto xuquuqda dadka la celinayo; lana timaado qorshe si nabad ah dadka loogu celiyo.